トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ AC Master Card [wokurarama zvikwereti chete]
wakaiswa-mwero wokurarama hurongwa. Minimum pamari yezvikwereti iri kubhadharwa kubva wokurarama chikwereti, inova zvitatu muzana iripo mari, chikamu asingasviki 1000 Yen iri vakagumisa kusvika 1000 Yen. Somuenzaniso, apo kushandisa mari yakanga 80,000 Yen, nokuti 3% ndiyo 2400 Yen, yakadereresa mutsividzo mari achava 3000 Yen.
kunotenga puranga riri mamiriyoni 3 Yen panguva miganhu soro, caching basa iri kubatanidzwa, unogona kuva neimwewo kadhi kumisazve kusvika mamiriyoni 5 Yen chemhando mukirasi.
nevatengi mari zvikuru kadhi ACOM rakapa, unogona kushandisa sechinhu chakajairika Kurejjitokado kumba uye kunze ane tenzi kadhi mushambadzi. Ndizvo chete zuva wakabudiswa kuongororwa mukati pfupi maminitsi 30. Kana iwe kusaina nokuda Indaneti, unogona kuderedza nguva yakawanda zvichienzaniswa nyaya pamusoro-the-yemabhuku. Annual muripo rakasununguka ndiyo nyaya ari kwemari yevanhu ava makore 20 kana vakura iri akatsiga.
mwedzi yokupedzisira musi mazuva 20, asi asingaiti batanidza chimbadzo uye nokuita kusvikira mwedzi unotevera 6 mazuva, mune nyaya mutsividzo pamusoro kana mazuva 7, nemari kuti akatsunga kubva pamazuva 7 paminiti mazuva 35 izvozvo vakafunga kuenda vanobhadharwa wokurarama chikwereti. Kana ichi hachisi muripo mukanyiwa anosvika 6 mazuva, kwaita inova wokurarama zvikwereti. Minimum mutsividzo chitsama panguva imwe
wokurarama zvikwereti, inova zvitatu muzana iripo mari, chikamu asingasviki 1000 Yen iri vakagumisa kusvika 1000 Yen. Somuenzaniso, apo kushandisa mari yakanga 80,000 Yen, nokuti 3% ndiyo 2400 Yen, yakadereresa mutsividzo mari achava 3000 Yen.
muganhu zvinogoneka neimwewo kadhi kumisazve kusvika mamiriyoni 5 Yen chemhando mukirasi. Kazhinji, kana tichifunga kuti vakawanda chikwereti mutsetse mamiriyoni 2 Yen kana kupfuura makadhi yakakwirira goridhe uye Premier kadhi gore negore muripo, sezvo pagore muripo vakasununguka kadhi, inoti iri nyore chaizvo.
muripo nzira akaundi Mukuwedzera otomatiki kushaya kuti, zvivanakire chitoro muripo kana kuchinjwa, rinogona kusarudzwa kubva muripo chakadai ATM ose ACOM. Kazhinji, makadhi, ichazovapo zvakadaro kamwe pasina mubereko, AC tenzi kadhi iri nokuti kadhi wokurarama zvikwereti chete, izvozvo kutora kufarira maererano nokushandiswa chitsama kadhi.
AC tenzi kadhi vafambi, hapana Kuratidzirwa zita kambani ACOM. The sirivha sezvo ruvara dzenyika, kuratidza uye Mudzidzisi Card, avo akadai nhamba ichiri kushanda uye nhengo kunge kurondedzerwa, handizivi kuti ACOM makadhi vanotsvakawo kwese. Kuongorora wakadaro ane mukurumbira anoputsa, hapana munhu kana kuitwa panguva dzose makadhi, paavhareji munhu anowira iri kadhi kuongororwa, uyewo kugadzikana kwemari kamwe wokutanga, zvakadai somunhu kuti aita tsaona zvemari kunyange 1 pane nevakawanda chete.
kwete chete kuJapan somunhu kadhi tenzi kuri kuwanikwa dzimwe nyika. Card wakabudiswa nokukurumidza, ndewekuti zvichibvira kuti ape, uchaona 3 masekonzi ari Web zvawanikwa. Kuongorora mune anoputsa zvishoma, bvunza nyore pane kadhi ngaateme kuti kunyange kana paine mashoko akaipa kuti mbiri ruzivo.
wokurarama rokubhengi, asi imi muchava kubhadhara mari kuti kwakasarudzwa abhadhare pamwedzi, zvakadai seapo munhu coherent mari wakapinda ruoko, iwe unogona rupo kubhadhara uyewo pachena. Contact kuna ACOM ndiyewo zvisingakoshi. Ratidza uye Card, avo yakadai musi wazvinenge uye nhengo nhamba vave kurondedzerwa, handizivi kuti ACOM makadhi vanotsvakawo kwese. Kuongorora wakadaro ane mukurumbira anoputsa, hapana munhu kana kuitwa panguva dzose makadhi, paavhareji munhu anowira iri kadhi kuongororwa, uyewo kugadzikana kwemari kamwe wokutanga, zvakadai somunhu kuti aita tsaona zvemari kunyange 1 pane nevakawanda chete.
wokurarama rokubhengi, asi imi muchava kubhadhara mari kuti kwakasarudzwa abhadhare pamwedzi, zvakadai seapo munhu coherent mari wakapinda ruoko, iwe unogona rupo kubhadhara uyewo pachena. Contact kuna ACOM ndiyewo zvisingakoshi.